दशैको मुखैमा नेपाली सेनाले गर्यो यती राम्रो निर्णय…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
दशैको मुखैमा नेपाली सेनाले गर्यो यती राम्रो निर्णय…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : नेपाली सेनाले दसैं बि’दामा जाने सैनिकलाई घरसम्म पु¥र्‍याउने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा को’रोना संक्र’मणको जो’खिम हुने भएका कारण सेनाले आफ्नै सवारी साधनमा घर पु¥र्‍याउने व्यवस्था गरेको हो।
सवारी साधनको व्यवस्था र रु’टको बारेमा सेनाको मु’भमेन्ट क’न्ट्रोल महाशाखाले तयारी गरिरहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले बताए। ‘यस वर्षको दसैंमा सकेसम्म कमलाई बि’दामा छा’ड्छौं, रुट मिल्नेलाई बस, हेलिकोप्टर र जहाजमा ठाउँठाउँमा पु¥र्‍याउने व्यवस्था गरेका छौं
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सकेसम्म कसैले पनि सार्वजनिक यातायात नचढ्ने गरी व्यवस्था मिलाएका छौं।’नेपाली सेनासँग ३ वटा ठूला हेलिकोप्टर, ३ वटा साना हेलिकोप्टर र ३ वटा स्का’इट्रक एउटा ४२ सिटे जहाज छ।
घर बि’दामा जाने टाढाका सै’निकलाई सेनाले जहाजमा विमानस्थलमा लैजाने छ। विमानस्थलदेखि सम्बन्धित स्थानका ब्या’रेकले उनीहरुको घरसम्म पु¥र्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने हेलिकोप्टरबाट पु¥र्‍याउने व्यवस्था गरेको छ।
नजिक र ठूलो संख्यामा पुर्‍याउनु पर्ने ठाउँमा सेनाले आफ्नै बस चलाउने छ। यसरी सवारी साधनको व्यवस्था गर्दा रुट र बिदामा जाने सै’निकको संख्या अनुसार व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
बि’दा सकेर फर्किंदा पनि यहि नि’यम लागु हुने छ। सेनाले आफ्नै सवारीमा ल्याउने छ। बि’दा सकेर फर्किएका सै’निकलाई क्वा’रेन्टिनमा राख्ने र पीसीआर गरेर मात्रै काममा ख’टाउने तयारी सेनाको छ। सेनाले कोरोना सं’क्रमणबाट आफ्ना ज’वानलाई ब’चाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
हालसम्म नेपाली से’नाका ३ हजार २ सय ४४ जना सै’निकमा कोरोना सं’क्रमण देखिएको छ। यसमध्ये १ हजार ७ सय ६७ जना नि’को भएर काममा फ’र्किएका छन्। कोरोना संक्रमणकै कारण दुई सै’निकको ज्यान गएको छ। ज्यान गु’माउने सै’निक रामेछाप र तनहुँका हुन्।
उनीहरुमा दि’र्घ रो’ग समेत थियो। कोरोना संक्रमित सै’निकलाई राख्नका लागि सेनाले ब्या’रेकैपिच्छे आ’इसोलेसन र क्वा’रेन्टिन तयार गरेको छ। वीरेन्द्र सै’निक अस्पतालमा २० बे’ड आ’ईसीयू र ८० बे’डको आ’इसोलेसन क’क्ष बनाइएको छ।
सूर्यविनायक ब्या’रेकमा ७० बे’ड, सै’निक म’हाविद्यालयमा एक सय बे’ड र ख’रिपाटीमा एक सय २५ बेडको आ’इसोलेसन सेनाले आफ्ना लागि तयार गरेको छ।
Prevनेता प्रकाशमान सिंह भन्नुहुन्छ : खातामा दशैंभत्ता पठाएर सरकारले सांसदहरुलाई जनताको नजरमा बदनाम गर्ने खोज्यो !
Nextजसपाले डा. बाबुराम भट्टराईलाई संघिय परिषद अध्यक्षमा नियुक्त गर्याे…हेर्नुहोस् ।
सरिता गिरीको स्थानमा लीला सिटौला प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने…हेर्नुहोस् ।
नेपालमै बन्छ थोरै लगानिमा यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनी लाई जिम्मा दिनुहोस ।
पुन शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति बनेमा काङ्ग्रेस पार्टी स,माप्त हुन्छ : सुजाता कोइराला…हेर्नुहोस!